Huawei P8 Lite ဆန်းစစ်လေ့လာမှုကိုကျွန်ုပ်တို့စေ့စေ့စပ်စပ်စမ်းသပ်ခဲ့သည် Androidsis
Huawei P8 Lite, အရည်အသွေးသည်စျေးနှုန်းနှင့်မကိုက်ညီသောကြောင့်
Alfonso က de Frutos | | Huawei, reviews
Aprilပြီလကုန်မှာ Huawei P8 Lite -...Huawei P8 Lite » /] သည်စပိန်ဈေးကွက်သို့ရောက်ရှိခဲ့သည်။ ဒီဇိုင်းနှင့်အင်္ဂါရပ်များပါ ၀ င်သောလက်ကိုင်ဖုန်းတစ်လုံးသည်၎င်း၏စွမ်းအားနှင့်အရည်အသွေးအပြီးသတ်မှုကြောင့်၎င်းကိုအလယ်အလတ်တန်း၏ထိပ်ဆုံးတွင်မြှင့်တင်ပေးသည်။
ဒီဖုန်းကိုနှစ်ပတ်ကြာပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်မရဲ့ကောက်ချက်ကအရမ်းရှင်းပါတယ်။ အဲဒါဟာစျေးကွက်ထဲမှာအကောင်းဆုံး mid-range ကိရိယာတွေထဲကတစ်ခုပါ။ ဒါဆိုဆက်လုပ်ကြရအောင် Huawei P8 Lite သုံးသပ်ချက်၊ သင့်ရဲ့ပြိုင်ဘက်များကိုတုန်ခါစေမည့်ဖုန်းတစ်လုံး။
2 Huawei P8 Lite သည်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဖြေရှင်းနည်းများကိုလောင်းကစားခြင်း
4 multitasking mode အတွက်အလိုအလျောက်မြန်ပြီးမြန်ဆန်သော interface ဖြစ်သည်
5.2 ပုံမှန်ဓာတ်ပုံနှင့် HDR mode တွင်ဓာတ်ပုံ
P8 Lite နှင့်၎င်း၏ box ကိုကြည့်ပြီးဖြစ်သည် ရိုးရှင်းသောဒီဇိုင်းHuawei ၏ဒီဇိုင်းအဖွဲ့သည်ဤရှုထောင့်အပေါ်များစွာအာရုံထားခဲ့သည်မှာရှင်းနေပါသည်။ ကိရိယာကိုသင်ကောက်ယူသောအခါ၎င်းသည်၎င်း၏ပြီးမြောက်မှုအရည်အသွေးကိုသတိပြုမိသည်။
၁၄၃ မီလီမီတာအမြင့်ရှိပြီး ၇၀.၆ မီလီမီတာရှည်သည် အကျယ် ၇.၇ မီလီမီတာသာ ရှင်းနေသည်မှာ Huawei P8 Lite သည်အလွန်အသုံးဝင်သောဖုန်းဖြစ်သည်။ ပြီးတော့ ၁၃၁ ဂရမ်အလေးချိန်ကဒီ terminal ကိုပေါ့ပါးတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်စေတယ်။
ပြီးတော့ဒီဇိုင်းကော။ နှင့်l P8 Lite သည်အလယ်အလတ်အဆင့်သတ်မှတ်ထားသောအလယ်အလတ်အကွာအဝေးရှိသည့်ပုံစံကိုချိုးဖျက်သည်; Huawei ၏ကျောက်မျက်ရတနာအနည်းငယ်သာအရည်အသွေးသည်အပေါက်တိုင်းမှထွက်ပေါ်လာသည်။
ပထမဆုံးအနေဖြင့် Huawei P8 Lite တွင်ကိုယ်ထည်ကို polycarbonate ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော်လည်းကျောဖုံး၏ဒီဇိုင်းကထိတွေ့မှုအတွက်အလွန်အဆင်ပြေစေသည်။ အပြင် ဖုန်း၏ပတ် ၀ န်းကျင်ကိုပတ်ထားသည့်လူမီနီယမ်ဘောင်သည်၎င်းကိုအလွန်ကောင်းသောပုံသဏ္givesာန်ပေးသည်။
ဖုန်း၏ညာဘက်အပေါ်ဘက်တွင် power ခလုတ်နှင့်အသံထိန်းချုပ်မှုတို့ကိုတွေ့ရသည်။ ခလုတ်များအားလုံးကိုလူမီနီယမ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး၊ ထိတွေ့ရန်အရည်အသွေးအလွန်သာယာသော။ ကျနော်တို့က၎င်း၏ဆောက်လုပ်ရေးမှန်ကန်သောထက်ပိုကြောင်းပြောနိုင်ပါတယ်။
နှစ်ခုလုံး micro SIM ကဒ်အထိုင်များနှင့်မှတ်ဉာဏ်ကဒ်, ကဒ်ဖယ်ရှားပစ်ရန်ပုံမှန် pin system ကိုအသုံးပြု။ terminal ၏ညာဘက်အောက်ခြေတွင်တည်ရှိသည်။ ကျွန်တော်ကြိုက်နှစ်သက်သောအချက်တစ်ချက်မှာ slot တစ်ခုသည် microSD ကဒ်နှင့် nano SIM ကဒ်နှစ်ခုလုံးအတွက်အသုံးပြုနိုင်သည်။ Huawei နှင့်အခြားထုတ်လုပ်သူများအတွက်အချက်တစ်ခု။
3.5mm jack သည် Huawei P8 Lite ၏ထိပ်တွင်ရှိပြီးစတီရီယိုစပီကာများသည်အောက်ခြေတွင်ရှိသည်။ အသံအရည်အသွေးသည်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အချက်တစ်ချက်ဖြစ်သည်။ စကားပြောသူများ၏အနေအထားကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့အားတစ်ခါတစ်ရံတွင်မှားယွင်းစွာထုတ်လွှင့်ခြင်းကိုဖြစ်စေသောကြောင့်အလွန်ဆိုးသည် အသံ, သိသိသာသာအသံအရည်အသွေးလျှော့ချ။ အများဆုံးထုတ်လုပ်သူများလုပ်ကြသောအမှားတစ်ခုဖြစ်သည်။
ပြီးတော့ဘယ်ဘက်မှာတွေ့ရတဲ့ကင်မရာကိုမမေ့နိုင်ဘူး သတိပြုရန်မှာကင်မရာသည်ဤအနိမ့်ဆုံးမျဉ်းကြောင်းနှင့်လိုက်ဖက်ခြင်းမရှိ Huawei P8 Lite မှထုတ်လွှင့်သောကြော့ရှင်းသည့်သဘော။
Huawei P8 Lite သည်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဖြေရှင်းနည်းများကိုလောင်းကစားခြင်း
P8 Lite မျက်နှာပြင်ကိုaတစ်ခုဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည် ၅ လက်မအရွယ် IPS LCD panel မှ resolution သည်5x 1280 pixels နှင့် 720 dpi ရှိသည်။ အမှန်တရားမှာအရည်အသွေးသည်အလွန်ကောင်းမွန်ပြီးအရောင်အသွေးစုံလင်သောအရောင်များကိုပေးစွမ်းနိုင်သည်။ ထို့အပြင် Huawei သည်အသုံးပြုသူတစ် ဦး ချင်းစီအားမျက်နှာပြင်၏ tonalities များကိုမိမိတို့ကြိုက်နှစ်သက်ရာကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်စေရန်အရောင်အပူချိန်ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းအတွက်ကြည့်ရှုထောင့်နှင့်စပ်လျဉ်း Huawei P8 Lite ဟာတကယ်ကောင်းပါတယ်, ကျယ်ပြန့်သောအကွာအဝေးကိုပူဇော်သက္ကာဘို့နှင့်မည်သည့်ပတ်ဝန်းကျင်တွင်အသုံးပြုရန်ခွင့်ပြု: ဘယ်လောက်ပဲနေပါစေ, သင်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရငါအလွန်တန်ဖိုးထားသောအရာ, ပြproblemsနာများမရှိဘဲမြင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။
အကယ်၍ သင်ဟာသော့ခလောက်ဘေးမှာဖုန်းကိုစွန့်ခွာပြီးမျက်နှာပြင်ကိုပျက်စီးစေနိုင်သည့်အခြားအရာတစ်ခုဖြစ်လျှင်စိတ်ချပါ။ The Corning Gorilla Glass4အကာအကွယ်အလွှာ P8 Lite ရဲ့ရှေ့မျက်နှာပြင်ကိုပေါင်းစပ်ထားတာကြောင့်များစွာသောခြိမ်းခြောက်မှုများကိုရှောင်ရှားနိုင်မှာပါ။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရကျွန်ုပ်သည်ထိုလူများထဲမှတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ ဤအမှု၌ရက်သတ္တပတ် ၂ ပတ်ကြာမြင့်စွာအသုံးပြုပြီးနောက် terminal သည်မည်သည့်ပျက်စီးမှုမှမခံစားရပါ။
ပါးပျဉ်းအောက်မှာကျနော်တို့ကအိမ်ပရိုဆက်ဆာ၏အမှတ်တံဆိပ်ကိုရှာတွေ့: ရှစ် core ကို HiSilicon Kirin 620 ၁.၂ GHz အမြန်နှုန်းနှင့် 1.2-bit architecture ဒီစွမ်းအားကို ARM Mali-64 GPU နဲ့ 450 GB RAM ထည့်သွင်းမယ်ဆိုရင် Huawei P2 Lite ဟာအင်အားကြီးမားတဲ့ terminal တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာရှင်းနေပါတယ်။
Su 16 GB Internal memory ၎င်းသည်သုံးစွဲသူအများစု၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးရုံထက်မကပေ။ ၎င်းသည်မလုံလောက်ပါကသင်၏ micro SD card slot သည်ဖုန်း၏ ROM ကို 128 GB အထိချဲ့ထွင်ရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်။
စားပွဲပေါ်နံပါတ်များထည့်ခြင်း၌သင်တို့ကိုငါပြောပြလိမ့်မယ် AnTuTu သည်ရမှတ် ၃၄၈၀၈ ရရှိခဲ့သည်၎င်းသည် Huawei P8 Lite သည်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်ဖုန်းဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်အရေးအကြီးဆုံးကတော့စာရွက်ပေါ်တွင်မည်သို့ပြုမူသည်ဆိုသောအချက်ပင်ဖြစ်သည်။ ဒီမှာအာရှထုတ်လုပ်သူထုတ်ကုန်အသစ်ဟာနို့တိုက်ကျွေးနိုင်တယ်။
စတင်ရန် P8 Lite သည်ပိုးကဲ့သို့အလုပ်လုပ်သည်။ Modern Combat5or Real Racing လိုအရင်းအမြစ်တွေအများကြီးလိုချင်တဲ့ဂိမ်းတွေကိုကျွန်တော်စမ်းကြည့်ခဲ့ဖူးတယ်။ တစ်ခုတည်းသော်သို့သော်တစ်ခါတစ်ရံတွင်၎င်းသည်အချို့ပူသောနေရာများ၊ ဖုန်းအချို့တွင်တွေ့ရလေ့ရှိသောကြောင့်၎င်းရှုထောင့်နှင့် ပတ်သက်၍ အလွန်အမင်းစိတ်မပူပါ။
HTC One ကိုအသုံးပြုသူတစ် ဦး အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်အသံပြaboutနာနှင့် ပတ်သက်၍ အနည်းငယ်စိတ်ရှုပ်ထွေးသည်။ ဆိပ်ကမ်းအများစုသည်များသောအားဖြင့်ဤကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်ကိုစိတ်ပျက်စေပါသည်။ အမှန်မှာသူတို့၏ပြောသူများသည်ထိုင်ဝမ်ထုတ်လုပ်သူ၏ BoomSound အရည်အသွေးကိုမမီနိုင်ပါ။ သူတို့၏အခြေအနေများကသူတို့ကိုသင်မှားယွင်းစွာဖုံးအုပ်နိုင်သည်ဟုဆိုလိုသော်လည်းကျွန်ုပ်တို့သည် ဤကိစ်စနှငျ့ ပတျသကျ၍ ကွီးမားသောလုပျငနျး။
သင့်စနစ် အသိဉာဏ်ရှိသောအသံချဲ့စက် (Smart Power Amplifier) ​​သည်အသံဖြတ်တောက်ခြင်းကိုကာကွယ်ပေးသည် သင်တေးဂီတကိုနားထောင်နေစဉ်၎င်းသည်အရည်အသွေးမြင့်သောအသံကိုပေးနိုင်ရန်ဖိအား၊ အပူချိန်နှင့်လွှဲခွင်တို့ကိုလည်းစစ်ဆေးသည်။
တိုတောင်းခုနှစ်, Huawei P8 Lite ကိုပြိုင်ဘက်များထက်ထူးခြားစေသည့်အချက်များအနက်မှတစ်ခု။ ဒါအမှန်ပဲ။
multitasking mode အတွက်အလိုအလျောက်မြန်ပြီးမြန်ဆန်သော interface ဖြစ်သည်
Huawei P8 Lite - သူ့ရဲ့ interface ကိုတွေ့ရတဲ့တစ်ခုတည်းသောဆိုးကျိုးကိုပြောဖို့အချိန်တန်ပြီ။ အမှန်အတိုင်းပြောရရင်ဒီလက်ကိုင်ဖုန်းနဲ့အလုပ်လုပ်တယ် Android 5.0၊ အာရှထုတ်လုပ်သူသည်၎င်း၏ custom interface EMUI 3.1 ကိုထည့်သွင်းထားသည်။ သင့်အနေဖြင့်ဖုန်းကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်သည့်အခွင့်အလမ်းများစွာကိုပြင်ဆင်နိုင်သည့်အပြည့်အဝပြုပြင်နိုင်သည့်မျက်နှာပြင်တစ်ခု။
ထိုသို့မှန်ပေမယ့် EMUI 3.1 သည်အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်ကိုပေးသည်, ဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့်ရပ်တန့်ခြင်းမရှိဘဲ, multitasking option ကိုအလွန်နှောင့်အယှက်ဖြစ်ပါတယ်။ အများဆုံးဖွင့်ထားသော application ၄ ခုကိုမြင်တွေ့ရပြီးသင်ဖွင့်ချင်သော application ကိုရှာရန်မတူညီသော ၀ င်းဒိုးများကိုဖြတ်ကျော်ရန်လိုအပ်ခြင်းသည်စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်သည်။
အချိန်တွေရှိတယ် multitasking ကိုအခွင့်ကောင်းယူဖို့ထက် main menu ကိုသွားပြီးကျွန်ုပ်တို့သုံးချင်သော application ကိုရှာရန် ပို၍ အဆင်ပြေသည်။ စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေမည့်အားနည်းချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်အသုံးပြုသူ၏အတွေ့အကြုံအပေါ်များစွာမလေးပါ။
အပြန်အလှန်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အလွန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောအသေးစိတ်အချက်အလက်အချို့ကိုမီးမောင်းထိုးပြရမည်။ စတင်ရန် P8 Lite သည်မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိရိုးရှင်းသောအမူအယာများကိုလုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့်အချို့သောလှုပ်ရှားမှုများဖြစ်သောကင်မရာသို့မဟုတ်တေးဂီတကိုခွင့်ပြုသည်။ အကျိုးသက်ရောက်မှုသည်အလွန်ဆွဲဆောင်မှုရှိပြီးလျင်မြန်လွယ်ကူစွာအလုပ်လုပ်သည်။ တရုတ်ထုတ်လုပ်သူရှိပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုအပြင် built-in FM ရေဒီယိုစံအဖြစ် Huawei P8 Lite ကိုသုံးမယ်၊ ငါကဖုန်းတိုင်း standard ဖြစ်သင့်တဲ့အခြေခံအချက်တွေထဲကတစ်ခုဖြစ်တယ်။
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရကျွန်ုပ်သည်ကင်မရာကိုစမတ်ဖုန်းတွင်အရေးအပါဆုံးအရာများအနက်မှတစ်ခုအဖြစ်ယူမှတ်သည်။ ဤကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ Huawei P8 Lite သည်အပြည့်အဝလိုက်နာသည်။ ယင်း၏အဓိကအခန်းတစ်ခန်းကဖွဲ့စည်းခဲ့သည် 278-megapixel Sony IMX 13 BSI မှန်ဘီလူး (f / 2.0 aperture နှင့်အကျယ်ထောင့် ၂၈mm) dual-LED flash သည်စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းမွန်ပြီး ISO, white balance, saturation, Exposure, contrast သို့မဟုတ် brightness စသည့် parameters များကိုပြင်ဆင်နိုင်သည်။
အမျိုးမျိုးသော capture mode များကိုကမ်းလှမ်းခြင်းအပြင်, Huawei P8 Lite ၏အဓိကကင်မရာသည်အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောလုပ်ဆောင်ချက်များကိုပေးသည်။
အသံမှတ်စုဖြေ - ဒီ mode နဲ့ဖမ်းယူတဲ့အခါအသံမှတ်စုတခုထည့်သွင်းနိုင်တယ်။ နှုတ်ခွန်းဆက်ခြင်း၊
HDR စနစ်- ဓာတ်ပုံတစ်ပုံရဲ့အရောင်တွေကိုရိုက်ကူးနိုင်တဲ့ HDR mode ကိုလူတိုင်းသိတယ်။ ၎င်းကိုမည်သို့မှန်ကန်စွာအသုံးပြုရမည်ကိုသင်သိပါကခြားနားမှုကသင့်ကိုစွဲမှတ်စေလိမ့်မည်။ အောက်ဖော်ပြပါဓာတ်ပုံများမှအသုံးဝင်မှုဥပမာများစွာကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။
စုစုပေါင်းအာရုံစိုက်မှု: ဤရွေးစရာကိုဖွင့်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပုံမှန်ဖမ်းယူမှုပြုလုပ်လိမ့်မည်။ သို့သော်ထို့နောက်ကျွန်ုပ်တို့သည် Huawei P8 Lite ၏အားကောင်းသည့်အပြောင်းအလဲဆော့ဖ်ဝဲလ်၏အားသာချက်ကိုရယူပြီးဓာတ်ပုံ၏မည်သည့်အစိတ်အပိုင်းကိုမဆိုအာရုံစိုက်နိုင်သည်။ တစ် ဦး အထင်ကြီးခြင်းနှင့်တကယ်အသုံးဝင်သော option ကို။
ငါကွဲပြားခြားနားသောပတ်ဝန်းကျင်တွင်အတွက်ကင်မရာကိုစမ်းသပ်ပြီးနှင့်ရလဒ်များကျေနပ်စရာထက်ပိုပါပြီ။ နေရောင်ခြည်ကဲ့သို့သောအကောင်းဆုံးအလင်းရောင်ရှိသည့်ပတ်ဝန်းကျင်များအတွက်၊ ရိုက်ကူးထားတဲ့ပုံရိပ်တွေကပြည့်စုံတယ် ကြည်လင်ပြတ်သားမှုနှင့်အဆင့်မြင့်ဖုန်းများနှင့်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သည့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များပါ ၀ င်သည်။
ဤရလဒ်များကိုအများကြီးမှစွပ်စွဲရမည်ဖြစ်သည် အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ပုံရိပ် post ကိုအပြောင်းအလဲနဲ့အလုပ် Huawei P8 Lite ကိုထုတ်ဝေသည်။ လက်ကိုင်ဖုန်းအတွက်ထုံးစံအတိုင်း၊ အလင်းမှိန်နေသောပတ်ဝန်းကျင်တွင်ဓာတ်ပုံရိုက်သောအခါကြောက်လန့်နေသောဆူညံသံသည်ပုံပေါ်စေသည်။
ပုံမှန်ဓာတ်ပုံနှင့် HDR mode တွင်ဓာတ်ပုံ
တစ်ခုတည်းသောတွေ့ရှိချက်တစ်ခုမှာ Huawei P8 Lite ကင်မရာသည်အလွန်တိုတောင်းသောအကွာအဝေးတွင်အာရုံစူးစိုက်ရန်ခက်ခဲသော်လည်းတိုတိုပြောရလျှင် Huawei P8 Lite ကင်မရာသည်စျေးကွက်ထဲတွင်အကောင်းဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည် နှင့်ဆက်ဆက်၎င်း၏အကွာအဝေးအတွင်းမည်သည့်ဖုန်းကိုလှည်း။
မကြာသေးမီကဥရောပစျေးကွက်သို့ ဦး တည်သည့် Honor အမျိုးအစားသည်ကျွန်ုပ်ဆန်းစစ်ခဲ့သောဆိပ်ကမ်းများ၏ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ကြောင့်ကျွန်ုပ်၏ပါးစပ်ထဲတွင်အရသာများစွာကျန်နေခဲ့သည်။ သို့သော် Huawei P8 Lite သည်ဤအခန်းတွင်လိုက်နာမှုရှိပါသလား။ အမှန်မှာ၎င်းသည် Honor ဆိပ်ကမ်းအဆင့်များသို့မရောက်နိုင်သော်လည်းကျွန်ုပ်ပြောသင့်သည် ၎င်း၏စွမ်းဆောင်ရည်ကျေနပ်ထက်ပိုဖြစ်ခဲ့သည်။ ပြီးတော့ Android 5.0 ကဘက်ထရီကိုကြမ်းတမ်းစွာသုံးစွဲပါတယ်။
အသုံးပြုမှုအကန့်အသတ်ရှိသည့် P8 Lite သည်ကျွန်ုပ်ကိုနှစ်ရက်လုံးလုံးကြာရှည်စေခဲ့သည်။ ပိုမိုထိရောက်စွာအသုံးပြုခြင်းအတွက်၊ ဂိမ်းကစားခြင်းကိုအချိန်တစ်နာရီ၊ နာရီခွဲခွဲကြာမြင့်သော Spotify နှင့်လူမှုရေးကွန်ယက်များနှင့်မာလ်တီမီဒီယာအကြောင်းအရာများမှတစ်ဆင့်ဖန်သားပြင်ကိုမြှင့်တင်ခြင်းတို့အတွက်၊ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါကရလဒ်မှာပိုမိုကောင်းမွန်သည်။ ကြောင်းပေါင်းစပ် 2.200 mAh ဘက်ထရီ။
ပုံမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်း၊ Huawei P8 Lite ကို ၃၂ နာရီကြာအသုံးပြုထားသည်ယနေ့စမတ်ဖုန်းတွင်မကြုံစဖူးအရာတစ်ခု။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ညဘက်မှာကျွန်တော်အိပ်နေစဉ်မှာအသိပေးချက်တွေရဖို့အစီအစဉ်မရှိတဲ့လေယာဉ်ပျံစနစ်မှာပါ။ P8 Lite သည်အခြားပြိုင်ဘက်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ထူးခြားသည်။
အဆိုပါခံစားချက်များကိုပိုပြီးအပြုသဘောပါပြီနိုင်ဘူး။ သာလွန်ကောင်းမွန်သောထိတွေ့မှု၊ သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောအရည်အသွေးမြင့်အရည်အသွေးနှင့်အကောင်းဆုံးသောစွမ်းဆောင်ရည်တို့ဖြင့်အနည်းငယ်မျှသောအရည်အသွေးတို့ဖြင့်ကြည့်နိုင်သည်။ နောက်ထပ်ဘာထပ်မေး ဦး မလဲ။ ချိန်ညှိစျေးနှုန်း။
ကြောင်းထည့်သွင်းစဉ်းစား Huawei P8 Lite ကို ၂၆၉ ယူရိုကျသင့်သည်အကယ်၍ သင်သည်အွန်လိုင်းတွင်ရှာဖွေပါက၎င်းကိုအမြဲစျေးသက်သာစွာရှာဖွေနိုင်သော်လည်း၎င်းသည်၎င်း၏အကွာအဝေးရှိဘုရင်နှင့်စဉ်းစားရန်စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်သည်မှာသေချာသည်။
Minimalist ဒီဇိုင်းနှင့်ချောချောမွေ့မွေ့သော Huawei P8 Lite ကိုအထူးကောင်းမွန်သောထိတွေ့မှုကိုပေးသည်
သူ့ရဲ့ 13-megapixel ကင်မရာဟာအကွာအဝေးမှာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပြီးစျေးကွက်ထဲမှာအကောင်းဆုံးထဲကတစ်ခုဖြစ်တယ်
multitasking mode ၏ EMUI 3.1 interface သည်အလွန်လက်တွေ့မကျပါ
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » Huawei » Huawei P8 Lite, အရည်အသွေးသည်စျေးနှုန်းနှင့်မကိုက်ညီသောကြောင့်
106 မှတ်ချက်များ, သင့်စွန့်ခွာ
ဟိုင်းဟိုင်း…။ ကျွန်ုပ်သည်ဆားငန်မည်ဟုတ်မဟုတ်မသိသော်လည်း Huawei အတွက်ဝါသနာပါသည်။ လောလောဆယ်ကျွန်ုပ်တွင် Ascend P7 ရှိပြီးစက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်ကောင်းသည်၊ ဂိမ်းများကိုကျွန်ုပ်နှစ်သက်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်စဉ်ဆက်မပြတ်နောက်ကျကျန်နေသည်။ နဂါးငွေ့တန်း S3 နှင့်သူငယ်ချင်းများ သတ္တုတူးဖော်ရေးဘေးရှိမည်သည့်နေရာတွင်မဆိုယိုယွင်းနေသဖြင့်၎င်းတို့သည်တူညီသောဂိမ်းနှင့် ပတ်သက်၍ စကားပြောနေစရာမလိုပါ။ သူတို့ထည့်ထားသည့်အရာများစွာအတွက်တရုတ်သည်တရုတ်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ယူရို ၁ ဒေါ်လာပင်တရုတ်မိုဘိုင်းတွင်မသုံးစွဲပါ။
ငါကတစ်ခြားနေ့ကကြိုးစားနေတယ်၊ ​​အမှန်တရားကတော့စျေးနှုန်းအတွက်ကျွန်ုပ်အတွက်သိပ်မထင်ပုံရသည်။ ငါကဒီ P2 lite မတိုင်မီ G8 ကို ၀ ယ်မှာပါ။ အထူးသဖြင့် Huawei အလွှာကအရမ်းဆိုးပြီးဟုတ်ကဲ့လား၊ ဟုတ်လား၊ Samsung ရဲ့ထက်တောင်ပိုဆိုးနေလို့ပါ။
ကောင်းပြီ၊ ကျွန်ုပ်တွင် Ascend P7 မိုဘိုင်းနှင့်တူညီမှုမရှိပါ။ မည်သည့်ဂိမ်းကစားသည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ၊ သို့သော် RF2012 တွင်ပြproblemနာမရှိပါ၊ တူညီသောသည် launcher တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ emui နှင့်အတူအဆင့်တူသောဖုန်းကိုကျွန်ုပ်မသုံးပါ။ ဒါပေမယ့် Smart Launcher ကအနည်းငယ်မျှသာဆန်တယ်၊ အရင်းအမြစ်တွေနည်းတယ်၊ နောက်တော့နောက်ကျလွန်းတယ်၊ တစ်နှစ်အတွက်အရမ်းပျော်တယ်။
Alfonso ကင်မရာအကြောင်းခင်ဗျားပြောတာက P7 ရဲ့ကင်မရာဟာအရမ်းကိုမှန်ပါတယ်။
Android 8 နဲ့ P5.0 LITE RUNS KITKAT ဖြစ်လို့အမှားတစ်ခုလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။
P8 Lite ကို Android 5.0 သို့အဆင့်မြှင့်တင်ပြီးဖြစ်သည်။
ဝမ်းနည်းပါတယ် Alfonzo ။ ငါဗင်နီဇွဲလားမှာနေထိုင်သည်, update ကို ota မှတဆင့်ရောက်ရှိသို့မဟုတ်ကိုယ်တိုင်လုပ်ဖို့နည်းလမ်းရှိပါသလား
ပြproblemsနာမရှိပါ Alberto 😉
သင်၏ကိစ္စတွင်ဖုန်းကို root လုပ်ရန်တစ်ခုတည်းသောရွေးချယ်စရာမှာ Android 5.0 ပါသော ROM ကိုသင်ထည့်ပြီးပြီဖြစ်မည်ကိုကျွန်ုပ်ကြောက်သည်။ သို့သော်သင့်အား update ကိုတရားဝင်ထုတ်ပြန်ရန်စောင့်ဆိုင်းရန်သင့်အားအကြံပေးသည်။
Miguel အိန်ဂျယ် Gamero chuimes ဟုသူကပြောသည်
ဤအချက်သည် Huawei ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်ပေါ်လာသည်။
Huawei P8 lite ၏အသံစပီကာသည်အသံချဲ့စက်စနစ် (Smart Power Amplifier) ​​ကြောင့်ဂီတကိုနားထောင်ရန်အသုံးပြုသည့်အခါအသံဖြတ်တောက်ခြင်းကိုတားဆီးပေးသည့်အပြင်၊ ဖိအား၊ အပူချိန်နှင့်လွှဲခွင်တို့ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းဖြင့်သင်၏မျှော်လင့်ချက်များထက်ကျော်လွန်လိမ့်မည်။ အရည်အသွေးမြင့်သောအသံများကိုပေးသည်။
ထို့အပြင်၎င်း၏ Hi-Fi စပီကာများခွဲထုတ်ခြင်းသည်ကြိမ်နှုန်းနိမ့်အသံများ၏ဆုံးရှုံးမှုကိုကာကွယ်ပေးသည်။ အသံတိုင်းသည်ရှင်းလင်းပြတ်သားပြီးအသေးစိတ်ဖြစ်သည်။
၎င်းသည်အမှားအယွင်းဖြစ်နိုင်သော်လည်းအများကိန်းတွင်ပြောဆိုသည်။ ငါ၏အမှု၌ငါသည်လည်းတ ဦး တည်းသာကြားပါ။
Miguel Angel Gamero အားစာပြန်ရန်
မေးခွန်း ၂ ခု ... ငါကြားဖူးပြီးပါပြီ။ စပီကာတစ် ဦး တည်းသာအလုပ်လုပ်သည်၊ ဖုန်းကို root လုပ်ပြီးအခြား rom တစ်ခုကိုထည့်သည်။ ငါကတော့ပြissueနာကအရမ်းရှုပ်ထွေးတယ်၊ ဒီဖုန်းအတွက် roms တွေမရှိသေးဘူး။ သိပြီးကျွန်ုပ် HTCMania ကိုနေ့စဉ်နီးပါးကြည့်သည်။ အကြောင်းမှာကျွန်ုပ် ၀ ယ်လျှင်ပထမဆုံးလုပ်ရမှာကကျွန်ုပ်တို့သွားသောကုမ္ပဏီများအားလုံးကဲ့သို့၎င်းသည် loaded overload ဖြစ်သော ROM နှင့် personalization layer ၏အမှိုက်သရိုက်များကိုဖယ်ရှားရန်ဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်ဟေး၊ အခုအချိန်မှာမင်းဒါကိုမလုပ်နိုင်ဘူး။ ပြီးတော့သူ့ကိုယ်ပိုင်ပရိုဆက်ဆာဖြစ်တာကြောင့်ကြည့်ရတာအရမ်းရှုပ်ထွေးတဲ့အရာဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ငါအရမ်းကြောက်တယ်။
ကောင်းပြီ၊ စိတ်မကောင်းပါ ... မေးခွန်း ၂ ခုထက်ပိုပြီး၊ သူတို့ကမတူကွဲပြားတဲ့စုံတွဲတစ်တွဲပါ။ ဒါပေမယ့်ကျွန်တော့်မသိမှုကအမြဲတမ်းသတင်းအချက်အလက်ပိုပေးနိုင်ရင်အယ်ဒီတာကိုသာငါမှတ်ချက်ပေးသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အကောင်းဆုံး လေးစားစွာ ...
ROMS ပြissueနာအတွက်ငါရှာနေတာမှန်ပါတယ်၊ P8 Lite သည်အခွံခွာရန်ခဲယဉ်းပုံရသည်၊ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့စောင့်နေရမည်။ စပီကာများအနေဖြင့် perforated area နှစ်ခုကိုသင်မြင်သောအခါစပီကာနှစ်ခုရှိသည်ဟုသင်ထင်ကောင်းထင်လိမ့်မည်။ သို့သော်စပီကာနှစ်ခုတွင်တစ်ခုမှာ microphone ဖြစ်သည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ ငါ၌ကျွန်ုပ်သည် HTC One ရှိသည်ဟုပြောခဲ့ပြီးဖြစ်သောကြောင့်အသံပြissueနာကြောင့်ကျွန်ုပ်အလွန်ဇီဇာကြောင်လာပြီးဤကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ P8 Lite နှင့်ပတ်သက်သောအတွေ့အကြုံသည်အလွန်ကောင်းမွန်ခဲ့သည်။
ဟောပြောသူနှင့်အသံအပေါ်ရှင်းလင်းချက်အတွက်အယ်လ်ဖွန်ဆိုအားများစွာကျေးဇူးတင်ပါသည်။ အမှန်တရားကတော့ဒီမိုဘိုင်းကိုကျွန်တော်ကြိုက်တယ်။ ပြည့်စုံတယ်။ ပြီးတော့မင်းကအသံကောင်းတယ်လို့ပြောရင်၊ ငါသိပ်အကုန်အကျမခံဘဲ S3 ကိုအစားထိုးနိုင်ဖို့အရာအားလုံးရှိတယ်ထင်တယ်၊ ငါအတွက် Roms ပြtheနာကိုငါဖြေရှင်းရသေးတယ် ငါဟာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အရာဖြစ်တယ်၊ ဒါကြောင့်ငါသူ့ကိုနောက်ကိုဆက်ပြီးလိုက်သွားမယ်၊ သူတို့ Roms ကိုယူလာတာနဲ့အမျှသူ့ကိုငါသွားမယ် ... နှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်
John gutierrez ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ Alfonso, ကောင်းသောနေ့, ငါ p8 lite ရှိသည်နှင့်နောက်ကျ။ သူကငါ့ကိုခေတ်သစ်တိုက်ခိုက်ရေး5ကစားရန်ခွင့်ပြုမထားဘူး, သူဝင်နှင့်ခဲ ငါဂိမ်းကိုစတော့မယ်။ ငါနင့် p8 lite ကိုဘယ်လို root လုပ်ရမယ်ဆိုတာသိချင်တယ်၊ ကိုလံဘီယာမှစာရေး၊ မင်းငါ့ကိုကူညီနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ခဲ့တယ်
ငါဟာတစ်လနဲ့တစ်နေ့နေ့တိုင်းငါ့ရဲ့ ၀ ယ်တာကိုပိုနှစ်သက်တယ်၊ ငါဟာ iPhone တစ်ခုမှလာတယ်၊ အရင်တုန်းကငါမှာပြတင်းပေါက်ဖုန်းတစ်လုံးရှိခဲ့တယ်၊ ငါ့ကလေးတွေမှာလည်း Android ဖုန်းတွေရှိတယ်၊ ဒါကြောင့်ငါနဲ့နှိုင်းယှဉ်ဖို့မော်ဒယ်တွေရှိတယ်၊ သူတို့ဟာ galaxy s1 or note4လိုမျိုးအမြင့်ဆုံးအပိုင်းအစတွေပါတဲ့မော်ဒယ်များကိုစမ်းကြည့်ပြီးတဲ့အခါသူတို့ကုမ္ပဏီများနှင့်အတူရွေ့လျားနေတယ်။
မင်္ဂလာပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ ငါစမတ်ဖုန်းကို Huawei ကစျေးကွက်ထဲမှာထွက်လာတာထက်ပိုကောင်းရင်ကောင်းကောင်းသုံးဖို့အကြံပေးချင်ပါတယ်။ ကြည့်ချင်တယ်။
ပိုကြီးတဲ့ terminal ကိုလိုချင်ရင် P8 Lite (သို့) P8 ကိုငါ့အတွေ့အကြုံကနေလွှင့်လိမ့်မယ်။
ကျွန်ုပ်၏ p8 lite ဖြင့်ဖန်သားပြင်တစ်ခုမည်သို့လုပ်ရမည်နည်း
Volume key ကိုနှိပ်ပြီး power ခလုတ်ကိုတစ်ချိန်တည်းနှိပ်လိုက်ပါ။ ၎င်းသည် screenshot တစ်ခုယူပါလိမ့်မည်။
Mr. Alfonso de Fruits .. မေးခွန်းတစ်ခုကိုအဖြေပေးမယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်။ p8 lite မှာစပီကာနှစ်ခုရှိပြီးသူတို့ကတစ်ခုတည်းပဲအလုပ်လုပ်တယ်။ ဒါဟာမှန်ပါတယ်။ ငါမင်းကိုအဖြေပေးချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဟီမ်ရမ်မင်၊ ငါကအယ်ဒီတာမဟုတ်ဘူး၊ မှတ်ချက်တွေကိုဖတ်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီမေးခွန်းကိုဖြေပြီးပြီ
စကားမစပ် Alfonso ကခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ကျွန်တော်ဒီမိုဘိုင်းအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ကိုရှာဖွေခဲ့တယ်၊ ဖတ်ပြီးတဲ့အခါငါဝယ်မယ်။ အရာရာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါစေ
ကျွန်ုပ်၏မေးခွန်းမှာ P8 lite ၏တယ်လီဖုန်းနှင့်အင်တာနက်လွှမ်းခြုံမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ဖြစ်သည်။ ဤ hdspa နှင့်ကျွန်ုပ်အနည်းငယ်ဆုံးရှုံးသည်။ စသည်တို့ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ရိုးရိုး Ace2နှင့်နှိုင်းယှဉ်ခြင်း၊ ၎င်းတွင် 3g သို့မဟုတ် 4g လွှမ်းခြုံမှုတွင် connection protocol များပိုမိုရှိသည်။ ?
ငါသည်သင်တို့ကိုဤမိုဘိုင်းပေါ်ရှိအသုံးပြုသူကိုပြောင်းလဲနိုင်လျှင်သိရန်လိုသည်, ဤမေးခွန်းကိုငါ့ကိုအဘယ်သူမျှမဝဘ်ထဲမှာမဖြေဆိုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါ့ကိုအလွန် grated ဖြစ်ပါတယ်။
မေးခွန်းတစ်ခု။ ကျွန်ုပ်သည်ဖုန်းထဲတွင်နောက်ထပ်မှတ်ဉာဏ်ထည့်ထားသော်လည်း application တစ်ခုကိုဒေါင်းလုပ်ချရန်ကြိုးစားသောအခါ၎င်းတွင်နေရာမရှိသလောက်ကိုဖော်ပြသည်။ ၎င်းကို Sd မှတ်ဉာဏ်တွင်ထည့်သွင်းရန်မည်သို့ပြောရမည်နည်း။
လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်ကစုံစမ်းမေးမြန်းမှုတစ်ခု Huawei p8 lite ကိုကျွန်ုပ် ၀ ယ်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်သည်။ whatsapp နှင့်ပြproblemနာတစ်ခုသာရှိသည်။ ဖုန်းကင်မရာတစ်ခုမှဓာတ်ပုံများကိုကျွန်ုပ်မဝေမျှနိုင်ပါ။ ကျွန်ုပ်အမှားတစ်ခုရရှိသည်။ သငျသညျအကြှနျုပျကိုကူညီနိုင်လျှင်
ပြီးတော့ Huawei P8 Lite မှာဘယ်လို NFC ရှိသလဲဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်မှုအရည်အသွေး။
အော်စကာ Diaz Marquez ဟုသူကပြောသည်
မင်းမှာ NFC ရှိရင်
Oscar Diaz Marquez အားပြန်ပြောပါ
hello: ငါဓာတ်ပုံရိုက်ချင်တဲ့အချိန်မှာငါအဲဒီပုံမရလာတာနဲ့အတူတူပါပဲ။ ငါလုံးဝမရိုက်ပါဘူး !!!!!!
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်၌ Huawei P8 lite ရှိထားပြီးပါပြီ။ ၎င်းသည်လူသိများသောအမှတ်တံဆိပ်များမှအခြားသူများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အလွန်ကောင်းမွန်ပြီးယှဉ်ပြိုင်နိုင်သည့်ဆဲလ်ဖုန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်အီးမေးလ် application များ၊ သကြားလုံးများကဲ့သို့သောဂိမ်းများ၊ ဓာတ်ပုံအယ်ဒီတာများနှင့်ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်အသုံးပြုခဲ့သည်။ လူမှုကွန်ယက်များ၊ အဓိကအားဖြင့်။
ဆဲလ်ဖုန်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့၌ရှိသောအားနည်းချက်များမှာ၊ ကျွန်ုပ်သည်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများကိုအလိုအလျောက်လက်ခံရရှိရန်ပြင်ဆင်သော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်၏လျှောက်လွှာများအားလုံးကိုတက်ကြွစွာလုပ်ဆောင်သော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်သည်အီးမေး (လ်) မှအီးမေးလ်မှ gmail, Facebook နှင့် whats app များမှအနည်းငယ်သာရပါသည်။ ဥပမာများ); သို့သော်ကျွန်ုပ်၏ Yahoo mail သို့မဟုတ် candy crush ကဲ့သို့သောအပလီကေးရှင်းများသည်အသိပေးချက်များမရရှိပဲ၊ လျှောက်လွှာကိုဖွင့်ရန်လိုအပ်သည်။
ငါတစ်စုံတစ် ဦး ကဤမှတဆင့်ခဲ့လျှင်, သူတို့ကသူတို့ဆော့ဖ်ဝဲကိုအဘို့အဘုံဖြစ်လျှင်သို့မဟုတ်ဘာကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်ရှိမရှိသိရန်လိုသည်။
ဟဲလိုသူငယ်ချင်း၊ သန့်ရှင်းရေးပရိုဂရမ်များစွာကိုကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင် install လုပ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်သိမ်းဆည်းသည်မှာသင်သည်ဖန်ခွက်ဖန်သားပြင်အကာအကွယ်သို့လင့်ခ်ကိုထည့်နိုင်သည်။ ၎င်းတွင်ကျွန်ုပ်ရှိသည်ပုံများတွင်၎င်းတွင်ပုံများတွင်အလွန်ကြည့်နေသည်။ ငါဝယ်လိုက်တာကဒီလောက်မမျှတဘူး၊ ပုံတစ်ပုံလုံးပတ်လည် ၂ မီလီမီတာအထက်ဒါမှမဟုတ်ဒီထက်နည်းသွားတယ်။ ဝယ်သူရဲ့မှတ်ချက်တွေမှာပါတဲ့လူအားလုံးကအတူတူညည်းညူကြတယ်၊
ဤ terminal နှင့် ပတ်သက်၍ သင်၏မှတ်ချက်များကိုဖတ်ပြီးနောက် 32G SD ကဒ်နှင့်၎င်းကို ၀ ယ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ဤကဒ်ကိုသိုလှောင်မှုတွင်ပုံမှန်ထည့်သွင်းထားသော်လည်းအသုံးချပရိုဂရမ်များအားလုံးကို internal memory ထဲသို့ကူးယူပြီး၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အားလွှဲပြောင်းရန်ခွင့်မပြုပါ D. သို့ SD card လုံးဝလွတ်နေချိန်မှာဖုန်းရဲ့ memory ကအရှိန်မြှင့်တဲ့အဆင့်မှာလျော့သွားတယ်။ ခင်ဗျားဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာစိတ်ကူးရှိတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ကောင်းတယ် ငါ Huawei ကိုသုံးရက်ကြာခဲ့ပြီးပြီ။ ငါသဘောကျတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါမင်းကိုမေးခွန်းတွေမေးချင်တယ်။ အဓိကတစ်ခုကတော့ blissful predictive keyboard ကိုဘယ်လိုပိတ်ရမှန်းမသိဘူး။ ဒီဟာကပိုပြီးအဆင်ပြေနိုင်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်သိတယ်၊ ဒါပေမယ့်စိတ်ငြိမ်သက်မှုအတွက်အဲဒါကိုငါဖယ်ထုတ်ပစ်နိုင်တယ်။ ငါက Google တစ်ခုအတွက် Swipe ကိုပြောင်းလိုက်ပြီ။ ငါ "အလိုအလျောက်ဆုံးမပဲ့ပြင်မှု"၊ "နောက်စကားလုံး၏ခန့်မှန်းခြင်း" ၏ရွေးချယ်စရာများအားလုံးကိုပိတ်ခြင်းအားဖြင့် Huawei ကိုရွေးလိုက်ပြီ ... ဒါကြောင့်မိုဘိုင်းမှာပြသနာရှိမရှိငါမသိဘူး။
နောက်တစ်ခုက Bluetooth ကိုသူ့ဟာသူ activate လုပ်တာကိုငါမြင်ခဲ့ပြီ၊ ငါမထင်ဘူးဒါပေမယ့်ငါမတော်တဆပေးထားတာကြောင့်ဒါကငါ့ကိုသိပ်စိုးရိမ်တယ်။ ဒါပေမယ့်ကားကိုစပီကာနဲ့ဆက်သွယ်တဲ့အခါလူတွေမှားယွင်းနေတယ်ဆိုတဲ့မှတ်ချက်တွေအများကြီးဖတ်ဖူးတယ်။ ကျွန်တော်မသိဘူး။
နောက်ဆုံးတော့သူတို့က "နှစ်ချက်နှိပ်" ပျက်ကွက်မှုအကြောင်းပြောနေတာဖြစ်တယ်။ သူတို့သော့ဖွင့်ဖို့ရွေးစရာကိုရည်ညွှန်းရင်ငါမသိဘူး (ဒီဟာကိုဒီလိုလုပ်နိုင်တယ်၊ ငါမစမ်းသေးဘူး) ဒါမှမဟုတ်အဲဒီအချိန်မှာ ကီးဘုတ်ထဲကိုစာရေးရင်မင်းကအက္ခရာ ၂ လုံးရတယ်။ ဒါကကျွန်တော့်အတွက်ဖြစ်ခဲ့တာ၊ ဒါပေမယ့်အခုအချိန်မှာငါဟာအဲဒါကိုချိတ်ဆွဲနေတုန်းပဲဆိုတဲ့အချက်ကိုချလိုက်မိတယ်။
Cq အကူအညီသည်အသုံး ၀ င်ပါသည်
Pedro Fernandez placeholder ပုံရိပ် ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ Miryam ။ ။ အမှားတစ်ခုနဲ့တခြားသူကိုကျွန်တော်မှတ်ချက်ပေးတယ် ငါကားထဲတွင်ဘလူးတုသ်ပြproblemနာရှိသည်။ ဒါဟာငါ့ကို LOW SIGNAL ကဲ့သို့ကားမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်မက်ဆေ့ခ်ျကိုနှင့်အတူ disk ။ သင့်အနေဖြင့်ဖြေရှင်းချက်သို့မဟုတ်ထင်မြင်ချက်ပေးခဲ့လျှင် ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်နှင့်မျှဝေပါ။ ငါမှာလည်း Moto G ရှိတယ်၊ ကားမှာချိတ်ဆက်စရာမလိုဘဲperfectlyုံအလုပ်လုပ်တယ်။ P8 အမှု၌မကြာခဏဖြစ်ပါတယ်။ ကြိုပြီးကျေးဇူးပါပဲ။
Pedro Fernandez အားပြန်ကြားပါ
Jhon Jairo Morillo ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်၏ Huawei p8 lite တွင်ပြသနာတစ်ခုရှိသည်မှာကျွန်ုပ်သည်ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ပေါ်တွင်ဗီဒီယိုများကြည့်နေစဉ်မျက်နှာပြင်ပိတ်သွားပြီး၊ ဤပြproblemနာကြောင့်အဘယ်ကြောင့်ဖြစ်ရကြောင်းကျွန်ုပ်မသိပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Jhon Jairo Morillo အားစာပြန်ပါ
Italo Garcia ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်တွင်ပြproblemနာတစ်ခုရှိသည်၊ ကျွန်ုပ်၏ huawuey p8 lite သည်ပျက်နေပါပြီ
Italo Garcia သို့စာပြန်ပါ
Jose maria ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်သည် Huawei P8 Lite ကိုလက်ခံရရှိခဲ့ပြီးပြproblemနာတစ်ခုရှိသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ဝိုင်ဖိုင်ချိတ်ဆက်ရန်ကြိုးစားသည့်အခါ router ၏စကားဝှက်ကိုရိုက်ထည့်နိုင်သော်လည်းစာသားများနှင့်မျက်နှာပြင်အနည်းငယ်ရရှိသည်။ သို့သော်ကီးဘုတ်သည်ထွက်ပေါ်လာခြင်းမရှိပါ။ ငါနည်းလမ်းထောင်ပေါင်းများစွာကြိုးစားခဲ့ပေမယ့်မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာသူကပြောတယ်ကီးဘုတ်ပေါ်လာလမ်းမရှိသော။ ကျွန်ုပ်သည်မည်သည့်အရာအတွက်မဆိုအင်တာနက်နှင့်ချိတ်ဆက်ရန်လိုအပ်သောကြောင့်မည်သည့်နေရာ၌မည်သည့်ကီးဘုတ်မျှပေါ်လာခြင်းမရှိသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တွင်လုံးဝအသုံးမကျသောဖုန်းရှိသည်။ ငါအမှားတစ်ခုခုလုပ်မိလား၊ ငါဘာလုပ်လို့ငါ့ကိုပြောပြနိုင်မလဲကြည့်ရအောင်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
jose maria သို့ပြန်သွားရန်
Johan Leal ဟုသူကပြောသည်
ကောင်းသောနေ့လည်သူငယ်ချင်းများ ... ကျွန်ုပ်၌ Huawei P8 Lite ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်အားဗွီဒီယိုများကိုမည်သို့ download လုပ်မည်နည်း၊ ကျွန်ုပ်အား၎င်းကိုတွေ့ခွင့်ပြုလျှင်၊ ၎င်းကိုကျွန်ုပ်အားဖုန်းမှတ်ဉာဏ်နှင့် / သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်လှူဒါန်းသည့် SD ကဒ်သို့သိမ်းဆည်းထားမည်မဟုတ်ပါ။ ဒီအတွက်ဒီရွေးစရာကိုမတွေ့ဘူး၊ တစ်ယောက်ယောက်ကကူညီနိုင်တယ်။
Johan Leal အားပြန်ကြားပါ
အားလုံး4မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ် iPhone XNUMX မှလာတာအမှန်ပါပဲ။ အဲ့ဒီဟာဟာဘယ်လောက်ဆင်တူလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်အံ့အားသင့်မိပါတယ်။ နောက်ဆုံးမှာတော့ရွံစရာကောင်းတဲ့ iTunes မပါပဲသီချင်းတွေကိုဖိုလ်ဒါထဲထပ်မံတင်လို့ရတာဝမ်းသာစရာပါ။
ကျွန်ုပ်ရှာတွေ့သည့်တစ်ခုတည်းသောပြproblemနာမှာနားကြပ်ပါသော iPhone နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အသံအနိမ့်အမြင့်ဖြစ်သည်။ ငါအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်အချိန်အများကြီးဖြုန်းဒါကြောင့်ငါ့အဘို့အရေးကြီးသောပုံရသည် ...
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ် P8 Lite ကို ၀ ယ်ပြီး၎င်းသည်၎င်း၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုရှာဖွေတွေ့ရှိနေဆဲဖြစ်သော်လည်းကျွန်ုပ်၏ဆဲလ်၏ဂီတကိုကားဘလူးတုသ်မှတဆင့်နားမထောင်သောပြwithနာနှင့်ကြုံတွေ့ရသည်။ ၎င်းသည်ချိတ်ဆက်ပြီး ဖြစ်၍ ကျွန်ုပ်ဖုန်းခေါ်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်မည်မျှပင်ကြိုးစားပါစေကားထဲတွင်ကျွန်ုပ်၏ဂီတကိုမည်သို့နားထောင်ရမည်ကိုရှာမတွေ့ပါ။ မည်သူမဆိုယင်းကိုမည်သို့ပြုလုပ်ရမည်ကိုသိပါသလော။
ငါမှာ p8 lite ရှိတယ်။ အလယ်အလတ်တန်းစားဖြစ်တယ်။ ဒါပေမယ့်သင်ဝယ်မယ်ဆိုရင် g2 ကိုရွေးပါ။
ကျွန်ုပ်တွင် Huawei p8 lite ရှိသည်။ အက်ပလီကေးရှင်းအောက်ရှိအက်ပလီကေးရှင်းနှင့်သင်၏ watsapp နှင့်အခြားသူများအားသီးသန့်တည်ရှိမှုကိုပိတ်ဆို့ခြင်းနှင့်အခြားသူများအားအသုံးချခြင်းကဲ့သို့သောအက်ပလီကေးရှင်းများပိတ်ဆို့ခြင်း၊ ၎င်းသည်အမှားများရှိသည်၊ screen the blocker သူအလုပ်မလုပ်တော့ဘူး၊ ငါတော်တော်များများကြိုးစားခဲ့တယ်၊ အတူတူပဲဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ် ။,,,,,,,, ဒီဆဲလ်ထဲမှာအလုပ်လုပ်တဲ့အရာတစ်ခုခုကိုမင်းသိသလား။
ငါမှာဟွာဝေး 630 ရှိခဲ့တယ်။ မနေ့ကငါမှာ P8 lite ရှိတယ်၊ ငါဒီအရာတွေအတွက်အသစ်အဆန်းတွေကြောင့် MENU key ဘယ်မှာရှိတယ်ဆိုတာငါ့ကိုတစ်ယောက်ယောက်ကပြောပြနိုင်မလား။ ငါသူမကိုမည်သည့်လမ်းအတွက်မမြင်ရအကြောက်လွန်ရောဂါရပြီ။
၀ န်ဆောင်မှုအားလုံးနှင့်လမ်းညွှန်သို့မဟုတ်ညွှန်ကြားချက်များကိုကျွန်ုပ်မည်သည့်နည်းနှင့်မဆို P8 lite တွင်အရာများထည့်သွင်းခြင်းသို့မဟုတ်ဖယ်ထုတ်ခြင်းကဲ့သို့သောနည်းလမ်းအားကျွန်ုပ်ရှာဖွေတွေ့ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်၏ WHATSAPP အုပ်စုအတွက်လေသံနှင့်ကျွန်ုပ်၏ပုဂ္ဂလိကသူငယ်ချင်းများအတွက်ဖြစ်သည်။ လမ်းညွှန်ကငါ့ကိုကောင်းကောင်းလုပ်ပေးလိမ့်မယ်
အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ ကောင်းပြီ၊ ဒီမိုဘိုင်းဖုန်းနှင့်ကျွန်ုပ်၏အတွေ့အကြုံသည်အလွန်ကြီးမားသောအကြောင်းအနည်းငယ်ပြောပြပါမည်။
အမြန်နှုန်းအကြောင်းပြောကြပါစို့။ စျေးနှုန်းအတွက်စူပါအရည်ပါသောဖုန်း၊ ကျွန်ုပ်အတွက် Moto G1 ထက်ကျော်လွန်သောမိုဘိုင်း၊ ကျွန်ုပ်မှာနှစ် ဦး စလုံးရှိပြီးကတည်းကအမှန်တရားမှာကျွန်ုပ်သည်ဤကဲ့သို့သောမိုဘိုင်းဖုန်းကိုအချိန်အကြာကြီးမရွေးထားပါ။
၂- စပီကာများ - post တွင်ဖော်ပြသည့်အတိုင်းကောင်လေးသည်အသံနှင့်အလွန်ဆူညံနေသည်။ ကျွန်ုပ်လည်း Huawei ကိုအမြဲတမ်းချစ်မြတ်နိုးပြီးသူတို့ကကျွန်ုပ်အားအမြဲတမ်းစိတ်ပျက်စရာဖြစ်အောင်လုပ်ပေးသည်မှာအံ့သြစရာပင်။ သို့သော်၎င်းသည်အမှန်တရားပင်ဖြစ်သည်။
၃ ဒီဇိုင်း - အလွန်ပေါ့ပါးပြီးလှပသောမိုဘိုင်းလ်ပါ ၀ င်သည်။ အားလုံးရှုထောင့်တစ် ဦး ကအဖိုးတန်မိုဘိုင်း။
၄- ကင်မရာ - ဒီနေရာမှာငါ့ကိုစိတ်ပျက်စရာတစ်ခုရှိတယ်။ ၎င်းတွင် P4 Grande ကဲ့သို့ကင်မရာမပါဝင်သောကြောင့်၎င်းသည် Huawei ၏အကွာအဝေးတစ်ခုလုံးကိုအထူးပြုလုပ်ထားသောအရာတစ်ခုဖြစ်သော်လည်းအရည်အသွေးမှာသံသယမရှိဘဲ ၁၀၀% ပြီးပြည့်စုံသည်။ တစ်နေ့ကျတော့ကျွန်မရဲ့ Nikon နဲ့ MY HUAWEI ကိုကျွန်တော်ဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့တယ်။ ကင်မရာနဲ့အရာအားလုံးအကြားအမှန်တရားကိုနှိုင်းယှဉ်နိုင်ပါတယ်။
ပြောစရာမလိုဘဲဤကြီးမားသောမိုဘိုင်းကို ၀ ယ်ခြင်းသည်၎င်းအတွက်စျေးကြီးသည်။
ကျွန်ုပ်မှာ P8 Lite နဲ့ပြaနာရှိနေပါတယ် ငါ update ကိုလက်ခံရရှိ B170 ငါက install လုပ်။ ထို့နောက် Wi-Fi မှတဆင့်ချိတ်ဆက်ပါလျှင်ငါအင်တာနက်, မေးလ်, သို့မဟုတ် whatsapp အလုပ်လုပ်ခဲ့ကြပြီမဟုတ် ... မည်သူမဆို၎င်းကိုမည်သို့ပြုပြင်ရမည်နည်း။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်၌ Huawei P8 lite ရှိပြီးကျွန်ုပ်၌ကြုံတွေ့ရသည့်တစ်ခုတည်းသောပြသနာမှာအသံဖြစ်သည်။ သို့သော်မှတ်စုမြင့်မားမှုနှင့်မဟုတ်ပါ။ အနိမ့်အမြင့်များဖြင့်သာဖြစ်သည်။ အသံအနိမ့်အမြင့်သည်အနည်းဆုံးပြောရန်မရှင်းလင်းပါ။
တစ်စုံတစ် ဦး နှင့်ဖြစ်ပျက်ခဲ့လျှင်သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်ကိုတစ်ခုခုလုပ်ရန်သင်အကြံပေးပါကကျေးဇူးတင်ပါသည်။
မင်္ဂလာပါ။ ငါ့ကိုကူညီသူ၊ ကျွန်ုပ်၏ P8 Lite ရေဒီယိုကပျက်နေပြီ၊ ပြန်လည်ချိန်ညှိပြီးပြီ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မင်းကိုကူညီနိုင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Jose Arturo Perez N ကိုပြန်ပြောပါ
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်၏ Huawei p8 lite ပြသနာရှိပါက၊ ၅ ရက်အကြာကဝယ်ယူခဲ့ပြီးဝယ်ယူသည့်နေ့တွင်မြင်ကွင်းကျယ်ဓာတ်ပုံရိုက်လိုပါကဓာတ်ပုံ၏အစကိုသာရနိုင်ပြီး၊ ကျန်သည့်အရာမှလည်းထွက်ပေါ်လာခြင်းမရှိပါ။ , ကျွန်တော်ဘာလုပ်ပေးရမလဲ?
Jonathan inkwell ဟုသူကပြောသည်
ငါ့မှာဖုန်းတွေလွန်ခဲ့တဲ့ ၂ ရက်ကကမ္ဘာပေါ်မှာအဆိုးဆုံးပဲ။
စာတွေထပ်ခါတလဲလဲမြန်မြန်ရေးလို့မရဘူး။ ငါဘက်ထရီကိုတစ်နေ့နှစ်ကြိမ်အားသွင်းတယ်။ ထိတ်လန့်စရာကောင်းတယ်။
Jonathan Inkwell အားပြန်ပြောပါ
မီနူးမှမြင်ကွင်းကျယ်ဓာတ်ပုံကိုရွေးချယ်ပါ။ ဘယ်ဘက်တွင်စတုရန်းလေးတစ်ချောင်းပေါ်လာပြီးအလယ်ဗဟိုတွင်ရှိသောမြားတစ်ခု (သင်ဆက်တိုက်ဓာတ်ပုံရိုက်ရန်ကင်မရာကိုညာဘက်သို့ရွှေ့ / လှည့်ရမည်ကိုညွှန်ပြရန်ဖြစ်သည်) ထို့နောက်သင်သည်ရှပ်တာကို နှိပ်၍ ပထမဆုံးဓာတ်ပုံရိုက်သည်။ ပြီးနောက်သင်မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိအဖြူရောင်အမှတ်အသားအတွင်းပတ် ၀ န်းကျင်အနည်းငယ်နှင့်ကိုက်ညီသည်အထိသင်ဖြည်းဖြည်းချင်းလှည့်ပါ။ ထိုအချိန်တွင်အဖြူရောင်သည်အစိမ်းရောင်ဖြစ်လာပြီးအခြားဓာတ်ပုံရိုက်သည်။ သငျသညျအဆင်ပြေထင်သလောက်နှင့်ဒါပေါ်; နောက်ဆုံးတွင်သင်သည်ရှပ်တာကိုနောက်တစ်ကြိမ် နှိပ်၍ ကင်မရာသည်ရိုက်လိုက်သောဓါတ်ပုံအားလုံးကိုလုပ်ဆောင်ပြီး၎င်းတို့ကိုတစ်ခုတည်းသောမြင်ကွင်းကျယ်သို့ပြောင်းလဲလိုက်သည်။ မင်းအတွက်အလုပ်လုပ်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်
Andrea Ochoa ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်၏ပြproblemနာမှာဖန်သားပြင်ပေါ်တွင်ပြသထားသည့်အရောင်များနှင့်ဓာတ်ပုံများကျန်ရှိနေပါသေးသည်။ ၎င်းတို့သည်သာမန်အရောင်များမဟုတ်ပါ။ ဘယ်သူ့ကိုမှငါ့ကိုကူညီနိုင်မလား? ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Andrea Ochoa အားပြန်ကြားပါ
Mauricio Becerra Castro ဟုသူကပြောသည်
မေးခွန်းတစ်ခုကမင်းရဲ့ပြproblemနာကိုဖြေရှင်းခဲ့တာလား။ ငါနဲ့အတူတူပါပဲ။ ခင်ဗျားဖြေရှင်းလိုက်ရင်အဖြေပေးပါ။
Mauricio Becerra Castro အားပြန်ပြောပါ
ဆိုနီယာ Esteban ဟုသူကပြောသည်
အထက်ပါမေးခွန်းများကိုဖြေဆိုရန်ဘယ်သူမှမရှိပါ !!! !!!
ကျွန်ုပ်၌ပြproblemsနာနှစ်ခုရှိသည်။ တစ်ခုမှာ WhatsApp အကြောင်းကြားစာများ၏အသံကိုလျှော့ချရန်ကျွန်ုပ်မသိပါ၊ အခြားတစ်ခုမှာယခင်မှတ်ချက်များတွင်ကျွန်ုပ်ဖတ်ခဲ့သည့်အတိုင်းပုံတူပွားခြင်းဖြစ်သည်။
Sonia Esteban အားပြန်ပြောပါ
လုံခြုံရေးအက်ပလီကေးရှင်းမရှိသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တွင် P8 lite ရှိသည်။ ၎င်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်မသိသောတစ်ခုတည်းသောအကြောင်းရင်းမှာဘာကြောင့်၎င်းပြprivacyနာရှိနေတာလဲ၊ ကျွန်ုပ်၏မေးခွန်းကိုဖြေဆိုနိုင်မလား။
တစ် ဦး ကသံသယငါ့ huawei p8lite
၁၆ ဂစ်ပါ၊ မျက်နှာပြင်မှာကျွန်တော့်မှာ ၁၀ gigs ရှိတယ်၊ ၁.၇ ဂအခမဲ့ရတယ်။
Alfonso de Frutos, နောက်ခံအချက်အလက်ကိုဘယ်လိုကန့်သတ်ရမလဲ၊ ဒါပေမဲ့လျှောက်လွှာကြောင့်ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းကိုကျွန်ုပ်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲလို့သင့်အားမေးချင်ခဲ့သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ Data Traffic Management-> Network Applications တွင်ဤရွေးစရာကိုကျွန်ုပ်တွေ့ရှိခဲ့သည်။ သို့သော်၎င်းသည်အပလီကေးရှင်းအားလုံးအတွက်အတူတကွလုပ်ဆောင်သည်။ အချို့ကိုဟုတ်ကဲ့၊ အခြားသူများအတွက်မလုပ်လိုပါ။ ဥပမာ - WhatsApp မှထွက်ခွာရန် Facebook ကိုတက်ကြွစွာကန့်သတ်ပါ။ ဖြစ်နိုင်ပါသည်? ငါနှင့်အတူပူးပေါင်းတန်ဖိုးထားလိမ့်မယ်။ မင်္ဂလာပါ
ခရစ်စတီးနား ၄ ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်အမည် Cristina ပါ။ ကျွန်ုပ်၌ Huawei p8 lite ပါ။ အရင်ဖုန်းတွေကလွဲပြီး Huawei တွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်မြင်တွေ့ရတဲ့အမှားတစ်ခုက screen ရဲ့ sensitivity ကအရမ်းကိုစိတ်ပျက်စရာကောင်းပါတယ်။ စာရေးခြင်းအချိန်တွင်အဆင်မပြေပါ။ ထောင်ထောင်ချီသောကီးဘုတ်များကိုကျွန်ုပ် download လုပ်ပြီးသော်လည်းကျွန်ုပ်ဘာမှမပြင်ဆင်နိုင်ပါ။ အခြားသူတစ် ဦး တစ်ယောက်၏ဖြစ်ပျက်မှုလား။ ဖြေရှင်းနည်းရှိလား။ ငါစတိုးဆိုင်သို့ခေါ်သွားပြီးအရည်အချို့ယိုဖိတ်သွားသည်ဟုပြောသောကြောင့်သူတို့ကကျွန်ုပ်ကိုဖန်သားပြင်ကိုကြည့်ရန်အားသွင်းသည်၊ သို့သော်၎င်းကိုကျွန်ုပ်ကတံဆိပ်ခတ်။ ဝယ်လိုက်သည်နှင့်မတူပါ။ အလွန်စိတ်ပျက်စရာကောင်းသည်ကိုကူညီပါ ..
ဒီ chat မှာဘယ်သူမှအဖြေမပေးပါဘူး။ ကျွန်ုပ်သည်သင်၏ Cristina လိုပါပဲ၊ ၎င်းသည်တစ်လမပြည့်သေးပါ။
ငါအထက်တွင်ရေးထားသည်အက္ခရာများကိုထပ်ခါတလဲလဲတူညီသောအရာ။ ဒါဟာ mediamarkt အပေါ်ဝယ်ခဲ့သည်။ အဆုံး၌သူတို့အသုံးပြုသောငါ့ထံသို့ရောင်းထွက်လှည့်။ ငါပြန်ပေးတယ်
Huawei အသုံးပြုသူ ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်၌ Huawei p8 lite ရှိသည်၊ သင်ဖွင့်သောအခါပြုလုပ်သောအသံကိုသင်မည်သို့ဖယ်ရှားနိုင်မည်နည်း။
User huawei အားပြန်လည်စစ်ဆေးပါ
Naiara ကုန်ကျသည် ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ ကောင်းပြီ၊ ငါသာ jinx ဖြစ်မဖြစ်ငါမသိဘူး၊ ဒါပေမယ့်ဒီဖုန်းကငါကိုပြproblemsနာတွေအများကြီးပေးနေတယ်။ ၂ လအကြာမှာရုတ်တရက် "ရုတ်တရက်ကွယ်လွန်သွား" တယ်။ အခုသူကကျွန်တော့်ကိုဝိုင်နဲ့မချိတ်ဆက်ဘူး - အိမ်မှာဒီကွန်ယက်နဲ့ router ပြtoနာကိုသာဖြေရှင်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ တစ်စုံတစ် ဦး ကကျွန်ုပ်ကိုအဖြေတစ်ခုပေးလျှင်ကျွန်ုပ်တန်ဖိုးထားသည်
မေးခွန်းတစ်ခုမင်္ဂလာပါ။ Huawei p8 lite ကိုဘယ်ဘက်ခြမ်းအစားပြန်ဖွင့်ရန်ခလုတ်ကိုပြင်ဆင်ရန်စီစဉ်ထားခြင်းရှိမရှိကိုငါသိချင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
agustin fernandez Isla ဟုသူကပြောသည်
ငါ့မိုဘိုင်း huawei p8 lite သော့ခတ်ခြင်းနှင့်ငါခေါ်သောလိပ်စာကိုနားမထောင်ခြင်း၊ ပိတ်ထားခြင်း၊ ဖွင့်ခြင်း၊ Pi ကိုထည့်သွင်းခြင်းနှင့်၎င်းသည်နောက်တစ်ကြိမ်အလုပ်လုပ်ခြင်းအကြောင်းတစ်စုံတစ် ဦး ကို ဦး တည်ဖော်ပြစေလိုသည်။ ကျွန်တော်ရှင်းပြချက်အနည်းငယ်လိုချင်ပါတယ်
agustin fernandez isla သို့ပြန်သွားပါ
Hugo Gonzalez ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်တွင် p8 lite ရှိသည်၊ ၎င်းတွင်စပီကာနှစ်ခုရှိပြီး၊ ၂ ကိုနားထောင်ရန်လိုအပ်ပါသလား။ မင်းဖြေရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
hugo gonzalez အားပြန်ပြောပါ
ငါ့မှာတစ်ခုရှိတယ်။ အရမ်းကောင်းတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါ့အကြိုက်ဆုံးဂိမ်းကို install လုပ်တဲ့အခါမှာပြhaveနာတွေရှိတယ်၊ candy crush ကအဲဒါကိုငါ install လုပ်ဖို့လုပ်တဲ့ကိရိယာတွေရဲ့ဗားရှင်းနဲ့မကိုက်ညီဘူးလို့ပြောတယ်။
ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များ၌စမတ်ဖုန်း၏နားကြပ်များနှင့်အသံအရည်အသွေးကိုမည်သူမဆိုမှတ်ချက်ပေးသည်ကိုကျွန်ုပ်နားမလည်ပါ၊ နားကြပ်နဲ့အသံအရည်အသွေးကောင်းတဲ့အလယ်အလတ်တန်းစားမိုဘိုင်းဖုန်းတစ်စုံတစ်ယောက်ကိုအကြံပေးနိုင်မလား။ Speaker ငါ့ကိုအရေးမပါဘူး ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး P8 Lite ဘယ်လိုလုပ်သလဲ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ကောင်းတယ် ကျွန်ုပ်တွင် P8lite ရှိသော်လည်းလူတိုင်းကဖြစ်ပျက်နေလျှင်ဂီတကိုနားထောင်သောအခါစပီကာတစ်လုံးတည်းသာကျွန်ုပ်အတွက်အလုပ်လုပ်သည်။
ထို့အပြင် WhatsApp မက်ဆေ့ခ်ျကိုပို့သောအခါသူကအသံမထားဘူး
ငါ့မှာ P8lite ရှိပေမယ့်ဘယ်ဘက်စပီကာတစ်ခုသာငါ့အတွက်အလုပ်လုပ်တယ်။
Whatsapp ၏အသိပေးချက်များကိုကျွန်ုပ်ဘာကြောင့်မမြင်နိုင်ပါသနည်း။ တစ်စုံတစ် ဦး ကကျွန်ုပ်ကိုကူညီနိုင်ပါသလား။
ကျွန်ုပ်၏ Huawei p8 ရေဒီယိုသည်မည်သို့သက်ဝင်ကြောင်းနှင့် Wi-Fi မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုတစ်စုံတစ်ယောက်ကသိသည်
မင်္ဂလာပါ Rusel ငါရေဒီယိုနှင့်အတူပြproblemsနာများရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပါ, ငါနားကြပ်ပလပ်, ရေဒီယိုနှင့်ရည်မှန်းချက်ကိုဖွင့်။ အလုပ်များ။
အကယ်၍ ၎င်းအလုပ်မလုပ်ပါကသင်နားကြပ်ကိုအင်တာနာတစ်ခုအနေဖြင့်ပြောင်းရန်အကြံပြုသည်၊ ၎င်းသည်မကောင်းလျှင်၎င်းသည်သင့်အားပြproblemsနာဖြစ်စေလိမ့်မည်။
ငါ့မှာ P8 Lite ရှိတယ်။
ငါအားနည်းချက်တွေ့ပြီ ငါ Bluetooth နှင့်အတူ Bluetooth နှင့်ချိတ်ဆက်သောအခါ, ကရုတ်တရက်ငါ့ကို LOW BT SIGNAL မက်ဆေ့ခ်ျကိုပေးသည်။
ထို့နောက်ခဏအကြာတွင်၎င်းသည် ပြန်လည်၍ ပြန်လည်ချိတ်ဆက်နိုင်သည်။
ငါ့မှာ Moto G ရှိတယ်၊ ငါဒီပြသနာကိုတစ်ခါမှမကြုံဖူးဘူး။
giron red ဟုသူကပြောသည်
hello သူငယ်ချင်းများနားကြပ်ကိုဆဲလ်ဖုန်း p8 နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည့်မေးခွန်းတစ်ခုမှာနားကြပ်သည်အလုပ်မလုပ်သေးသောအခြားမိုဘိုင်းဖုန်းတစ်ခုတွင်ကြိုတင်စမ်းသပ်ပြီးဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ p8 lite တွင်၎င်းသည်အလုပ်မလုပ်ပါ။ နားကြပ်အတော်များများကိုလည်းစမ်းသပ်ပြီးဖြစ်သည် ဒါအတူတူပါပဲ
giron rojas အားပြန်ပြောပါ
Luis de la Torre ဟုသူကပြောသည်
ငါမှာ Huaweyp8- ရှိပြီးစပီကာများကဘယ်ဘက်အခြမ်းကိုသာကြားရသည်။ ညာဘက်မှာရှိတဲ့သူကပုံမှန်ဖြစ် (သို့) အမှားတခုခုရှိရင်ခိုင်မာတယ်
Luis de la Torre အားပြန်ပြောပါ
မင်္ဂလာပါ၊ စပီကာတစ်လုံးသာသင်ကြားတာနဲ့ပတ်သက်လို့ပါ၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့တကယ်မှာတစ်ခုသာရှိလို့ဖြစ်ပြီးနောက်တစ်ခုကဒုတိယစပီကာနဲ့တူတဲ့မိုက်ကရိုဖုန်းပါ။ ကျွန်တော့်မှာမေးခွန်းတစ်ခုရှိတယ်။ 32 Gb ထက်ကြီးတဲ့ micro sd memory ကိုကြိုးစားခဲ့ဖူးသူရှိလား။ SDXC ကိုသုံးရင်ကော။ SDHC ကိုရိုက်ထည့်ပါ။
မင်္ဂလာပါ၊ လွန်ခဲ့သောတစ်လကကျွန်ုပ်သည် P8 lite ကိုဝယ်ယူခဲ့ပြီး၊ ကျွန်ုပ်၏ desktop ကွန်ပျူတာဖြင့် Wi-Fi နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည့်ဆဲလ်ဖုန်းမှအချက်အလက်များကိုမျှဝေရန်ထို option ကိုအသုံးပြုသောအခါကြီးမားသောပြbigနာတစ်ခုရှိသည်။ ၎င်းသည်မိနစ်အနည်းငယ်နှင့် dsps ကြာသည်။ ဆဲလ်ပိုပြီးသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုမပါဘဲပိတ်။ ကျွန်တော့် pc မှာ wifi option မရှိတဲ့အတွက်တကယ်ကိုအပူတပြင်းပါပဲ။ ဒါပေမယ့်အချိန်မတန်ဘဲပိတ်ထားလို့ဆဲလ်ပျက်စီးသွားမှာကိုငါစိုးရိမ်တယ်။ အကြောင်းပြချက်ကိုတစ်ယောက်ယောက်ကသိတယ်၊ ငါ့ညီမမှာ nokia mobile pig ရှိတယ်။ ဟုတ်ကဲ့သူမဖုန်းကိုဘာပြcellနာမှမရှိဘဲမျှဝေနိူင်တယ်။
ဟိုင်းနဲ၊ မင်းတစ်ယောက်ထဲထပ်တူမေးခွန်းရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်သိမှာလဲ Usb memory နဲ့ဆက်သွယ်ဖူးပါသလား။ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အားအသိအမှတ်မပြုပါ၊ ၎င်းသည်နောက်ပိုင်းတွင်မသန်စွမ်းပြီး၎င်းကိုကျွန်ုပ်အားအသက်သွင်းရန်ခွင့်မပြုပါ
မင်္ဂလာပါ၊ ဆဲလ်ဖုန်းတွင် 2gb ram ရှိသည်ဟုဆိုရမည်ဖြစ်သော်လည်း 1Gb ကို system မှအသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်နှင့်သာသက်ဆိုင်သည်သို့မဟုတ်အခြားသူများနှင့်အတူတူပဲလား ??? Xfa တစ်စုံတစ် ဦး ကဒီနှင့်ငါ့ကိုကူညီ
ကျွန်ုပ်၏ application များကိုကျွန်ုပ်၏ micro sd သို့ဘာကြောင့်ဘာသာ ပြန်၍ မရနိုင်ကြောင်းတစ်စုံတစ်ယောက်ကရှင်းပြသည်။ ငါ 8 ၏တ ဦး တည်းပို။ ဘာမျှထားပေမယ့်နေဆဲဖုန်းကိုမှတ်ဉာဏ်ထဲကမရှိသောကြောင့်, ဘာမှ update သို့မဟုတ်ဒေါင်းလုပ်လုပ်မရပါ
သူတို့သည်ကျွန်ုပ်၏မိုဘိုင်းဖုန်းကိုပြန်လည်ပြုပြင်ကြပြီး SD ထဲသို့ထည့်သောအခါမည်သည့်အရာမှထွက်ပေါ်လာခြင်းမရှိပါ။ ကဒ်မှသတင်းအချက်အလက်များကိုမည်သို့ပြန်လည်ရယူမည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
လူးဝစ်ဖာနန်ဒို Gonzalez Drada နေရာချထားပုံ ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်တွင် P8 Lite Ale 23 Double Sim Card ကိုတစ်လအသုံးပြုထားပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည် Simcards နှစ်ခုလုံးကိုအသုံးပြုနိုင်ပြီးတစ်ချိန်တည်းတွင် microSD ကဒ်ကိုအသုံးပြုနိူင်ပါသလား။ သို့မဟုတ်ငါ simcard ကိုအသုံးပြုပါက MicroSD နှင့်အပြန်အလှန်မသုံးနိုင်ပါလား။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ မင်းရဲ့အဖြေကဘိုဂိုတာကိုလံဘီယာကနေဖက်တာ။
Luis Fernando Gonzalez Drada ကိုပြန်ပြောပါ
Gabriela Buele Abad ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ အသံနိမ့်ပိုင်းနှစ်ခုစလုံးမှာအသံထွက်ရှိမှုရှိမရှိသိလား။ !
Gabriela Buele Abad အားပြန်ပြောပါ
Mark Lucero ဟုသူကပြောသည်
သင် p8 Lite ကိုဝယ်ချင်ပါသလား။ ပထမဆုံး gogleen: p8 Lite WiFi ပြproblemsနာများ (လူအများအပြားတွင်တူညီသောပြproblemနာရှိသည်) ဒါဟာကျွန်တော့်ဇနီးအတွက်တစ်လလောက်မကြာခဲ့ပါဘူး။ ကျရှုံးလာတယ်။ WiFi နဲ့မဆက်သွယ်တော့ဘူး။ Hard reset လုပ်တယ်၊ ROM ကိုပြန်တပ်တယ်။ ငါနေရာတိုင်းမှာအချက်အလက်ရှာတယ်။ ဘာမှမရှိဘူး။ လိုချင်သောအရာများစွာကျန်နေစေသည့်အမှန်တရား။
Marcos Lucero အားပြန်ကြားပါ
အာဘီ ဆိုလစ် ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါကောင်းသောနေ့လည်ခင်း !! ဘာဖြစ်သွားမလဲ။ ငါ microSD port ကို NanoSim အတွက်သုံးချင်တယ်ဆိုပေမယ့်ငါ့ကိုခွင့်မပြုခဲ့ဘူး။ ငါ့ကိုခွင့်မပြုဘူး။ ဒီကိစ္စမှာဘာလုပ်လို့ရလဲ။ ကျေးဇူးပြုပြီးကူညီပေးနိုင်မလား !! ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Arbey solis သို့ပြန်သွားပါ
Hector Hernández R. ဟုသူကပြောသည်
ဂူဂဲလ်ကမ္ဘာအက်ပလီကေးရှင်းသည် ၀ င်ရောက်ပြီးနောက်စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းပျက်သွားသည်။ ကျွန်ုပ်ပြန်လည်ထည့်ပြီးပြproblemနာကိုမဖြေရှင်းနိုင်ပါ
HéctorHernández R. အားပြန်ကြားချက်
fabio narvaez ဟုသူကပြောသည်
ဟယ်လိုလွန်ခဲ့တဲ့တလကသူတို့ကကျွန်တော့်ကို p8 lite ပေးတယ်။ အရက် ၂၀ လောက်ကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်တယ်။ အခု wifi အလုပ်မဖြစ်ဘူး။ ပြsameနာတစ်ခုတည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့မှတ်ချက်တွေအများကြီးဖတ်ဖူးတယ်၊ ဒါကဒီဇိုင်းကောင်းတယ်၊ အကြံပြုခံရလိမ့်မည်။
fabio narvaez အားပြန်ပြောပါ
မင်္ဂလာပါ၊ မကြာသေးမီကဘာတွေဖြစ်ပျက်ခဲ့သလဲငါ huawei p8 lite ကိုဝယ်လိုက်တယ်။ ငါဘက်ထရီအကြောင်းသိချင်တယ်၊ ၆ နာရီ ၈ နာရီသာကြာတယ်။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်တွင် p8 Lite ရှိပြီးကျွန်တော့်ဖုန်းကွေးနေပါတယ်။ တစ်ယောက်ယောက်ကမင်းကိုဖြစ်ပျက်ခဲ့သလား။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်ရွေးစရာကိုရှာမရသောကြောင့်ဖုန်းကိုမည်သို့သော့ဖွင့်ရမည်ကိုသိလိုသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
။ သတာ ဟုသူကပြောသည်
ငါငုံ့ပြီးကမဖွင့်ဘူး သူတို့ကကျွန်တော့်ကိုနည်းပညာ ၀ န်ဆောင်မှုအကြောင်းပြောတယ်၊ အာမခံကမဖုံးဘူး။ ဖုန်းက ၁ နှစ်ပဲရှိသေးတယ်။
ငါဆိုလိုသည့် p8 Lite ကိုမှ
အမ် Eugenia ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ ကျွန်ုပ်မှာ Huawei p8 lite အသစ်တစ်ခုပါ ထိုအခါပိတ်ထား device ကိုဘက်ထရီပါဝါအများကြီးစားသုံးသည်။ ရေဒီယိုကိုဖွင့်သည်ဟုကျွန်ုပ်ပြောသောအရာတစ်ခုကျွန်ုပ်၌၎င်းကိုမ activate လုပ်သည်။ တစ်စုံတစ် ဦး ကကျွန်ုပ်ကိုကူညီနိုင်မည်လား။
အမ် Eugenia မှ reply
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်၌ Huawei p8 lite ရှိပြီးဘက်ထရီသုံးစွဲမှုအသေးစိတ်တွင်အသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်။ ရေဒီယိုကိုသက်ဝင်စေပြီးအဲဒါကိုအရမ်းစားပါတယ်။ ကျွန်တော်ရေဒီယိုကိုမသုံးပါဘူး မည်သူမဆိုဖြစ်နိုင်သည်ကိုသိ?
မင်္ဂလာပါ၊ Huawei p8 lite ရှိတယ်၊ ကျွန်ုပ်ပို့လိုက်သော sms များကိုမည်သို့မြင်နိုင်သည်ကိုသိလိုပါသည်
မင်္ဂလာပါ၊ နှစ်ချက်နှိပ်ပါသည့်ပြproblemနာကိုမည်သူဖြေရှင်းရမည်ကိုသိပါသလား။ သင်ရေးသည့်အခါအက္ခရာနှစ်လုံးပေါ်လာပြီးဖြစ်သည်
Edgar Mc ဟုသူကပြောသည်
ဟဲလိုသည်ငါ HUAWEI P8 ရှိသလောက်သောမေးခွန်းတစ်ခုကိုကျွန်ုပ်၏ USB CABLE မှတစ်ဆင့် USB cable မှ ဖြတ်၍ ပြAနာကျွန်ုပ်သည်ကွန်ပျူတာသို့ဖိုင်များကိုလွှဲပြောင်း။ မရပါ၊ အိုင်ပက်ဒ် FUNCON မှအချက်အလက်များအားကျွန်ုပ်သိရှိနိုင်သည် ဖိုင်များမှသင့်အားအလွန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Edgar Mc အားစာပြန်ပါ
ကောင်းသောည, သူတို့ညောင်ညောင်ဓါတ်ပုံများကိုဘယ်လိုပြုပြင်ရမလဲဆိုတာသိချင်တယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
မင်္ဂလာပါ ငါက Huawei p8 lite ကိုတစ်လကြာအောင်လုပ်ထားပြီးပါပြီ။ အရင်ကထက်စပီကာကိုမကြားဖူးသေးဘူး။ ကြိုပြီးကျေးဇူးပါပဲ။ အရာရာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါစေ။